वास्तकविक मधेशी जनताको उत्थानका लागि नागरिकता विधेयक, अब धेरै सरिताहरु मन्त्री बन्न सक्दैनन: विडारी - Maxon Khabar
Home / News / वास्तकविक मधेशी जनताको उत्थानका लागि नागरिकता विधेयक, अब धेरै सरिताहरु मन्त्री बन्न सक्दैनन: विडारी
वास्तकविक मधेशी जनताको उत्थानका लागि नागरिकता विधेयक, अब धेरै सरिताहरु मन्त्री बन्न सक्दैनन: विडारी
२०७७ असार ९ - राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले धेरै सरिताहरुलाई तत्काल अंगीकृत नागरिकता दिएर मन्त्री बनाउने मेलोमा सरकार नभएको बताएका छन । राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा बोल्दै विडारीले नेपाली नागरिक सँग तथा नेपालीले कुनै पनी बिदेशी संग विवाह गर्न कुनै रोकतोक नभए पनि धेरै सरिताहरु लाई तत्काल अंगीकृत नागरिकता दिएर मन्त्री र सांसद बनाउने मेलोमा सरकार नभएको बताएका छन
उनले भने - विदेशीसँग विवाह गर्न पाइन्छ । भारतसँग मात्रै होइन् क्यानडा गएर गर्नु त्यो पनि नेपालकाे कानुनले दिन्छ । अमेरिका गएर गर्नु त्यो पनि नेपालले दिन्छ । अब हामी धेरै सरिताहरु चाँडै अंगीकृत बनाएर देशमा मन्त्री बनाउने सांसद बनाउने मेलोमा छैनौ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवलाई संकेत गर्दै उनले भने ‘दक्षिण एसियामा कुनै पनि देश छैन निःशर्त ड्याम्म बिहे गर्यो, ठ्याप्प नागरिक भयो, ठयाक्क सांसद भयो, ट्याक्क मन्त्री भयो यस्तो छैन दक्षिण एसियामै छैन ।
बैठकमा कांग्रेस सांसद देवले दिएको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै जनतालाई भ्रममा पार्ने गरी झुठा र वेइमानी कुरा नगर्न आग्रह समेत गरेका थिए । सांसद देवतर्फ संकेत गर्दै चीनको झोलामा नेपाललाई पार्ने कुरा बोल्ने तपाई कुन देशको झोले हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो उनले भने तपाईले कतापट्टि बोल्नु भयो भने के भन्ने ? भारतीय नागरिकलाई मात्रै लागु हुनेगरी सरकारले ऐन नबनाएको उनले बताए । विवाह गर्न कसैलाई रोकतोक नभएको उल्लेख गर्दै उनले यो प्रावधान भारतीय नागरिकलाई मात्रै लागु हुने कुरा नभएको जनाएका हुन । भारतीय नागरिकलाई मात्रै लागु हुने गरी सदनले ऐन बनाएको हो ? यहि हो उहाँको कुरा ? संसारभरबाट नेपालका ठिटाहरुले विदेशका ठिटीहरु विवाह गर्छन्, त्यो छुट छ ।
कसैलाई रोकतोक छैन। उनले थपे, विगतका वितरण गरिएका नागरिकताका विषयमा पनि यो ऐन बनाएको होइन । विश्वका सार्वभौम राष्ट्रले नागरिकता सम्बन्धी आफ्नै प्रकारको नीति ल्याउँछ । सरकारले वास्तकविक मधेशी जनताको उत्थानका लागि नागरिकता विधेयक ल्याइएको बताए । मधेशका नारीलाई होच्याएर विदेशबाट विवाह गर्दै फटाफाट नेता बनाएर मन्त्री बनाएर हिड्ने ? अब वंशज मधेशी नारीहरु उनीहरुको संरक्षण गर्ने ? अब वंशज मधेशीहरुको संरक्षण गर्ने चिन्ता त्यहाँको नेतालाई छैन । ती त मन्त्री हुन आएका मन्छे हुन्छन् मधेशको हित गर्दैनन। यताउती चाकडी गर्छन् । मन्त्री रिटायर हुन्छ । खुरुक्क घर जान्छन् त्यसैले मधेशमा विकास हुन सकेन। छोरी ज्वाईलाई दिने हो की सांसद र मन्त्री बनाउन दिने हो भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका थिए ।